घर बनाउदै हुनुहुन्छ? घट्न थाल्यो डन्डीको भाउ, तुरुन्तै हेर्नुहोस् – ramechhapkhabar.com
घर बनाउदै हुनुहुन्छ? घट्न थाल्यो डन्डीको भाउ, तुरुन्तै हेर्नुहोस्
काठमाडाैँ, १४ माघ ।
नेपालमा निर्माणको सिजन सुरु भएसँगै अप्रत्याशित रूपमा बढेको फलामे डन्डीको भाउ घट्न थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य घट्न थालेपछि नेपालमा पनि डन्डीको भाउ घट्न थालेको हो । नेपाल स्टिल तथा रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष एवं साख स्टिलका सञ्चालक किरण साखका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डन्डी बनाउने कच्चा माल बिलेटको मूल्य प्रतिटन ६० अमेरिकी डलरले घटेको छ ।
कच्चा मालको मूल्य घटेपछि पछिल्लो एक हप्तामै डन्डीको भाउ किलोमा ५ रुपैयाँले घटेको हो । अहिले डन्डीको फ्याक्ट्री मूल्य ब्रान्ड हेरीकन प्रतिकिलो ७२ देखि ८० रुपैयाँसम्म रहेको छ । उपभोक्ता (खुद्रा) मूल्य ९० देखि १ सय ५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । एक हप्ताअघि डन्डीको फ्याक्ट्री मूल्य किलोको ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको साखले बताए ।
नेपाल निर्माण सामग्री व्यापार संघका अनुसार हिमाल र पञ्चकन्या स्टिलले अझै डन्डीको भाउ घटाएका छैनन् । अहिले हिमालको १ सय ५ र पञ्चकन्याको १ सय १ रुपैयाँ खुद्रा मूल्य रहेको छ । घटेको मूल्यमा कच्चा पदार्थ आइनपुगेकाले हिमाल र पञ्चकन्याले मूल्य नघटाएको हुन सक्ने संघको भनाइ छ । अहिले अधिकांश ब्रान्डले खुद्रा मूल्य किलोमा ४–५ रुपैयाँ घटाएर ९० देखि ९२ रुपैयाँसम्म रहेको निर्माण सामग्री विक्रेता दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
दसैँ–तिहारअघि असोजसम्म डन्डीको फ्याक्ट्री मूल्य किलोको ५७ देखि ६५ रुपैयाँसम्म थियो । निर्माणको सिजन सुरु भएसँगै उद्योगमै डन्डीको मूल्य एकाएक २० रुपैयाँसम्म बढेर ७६ देखि ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य घटेसँगै आन्तरिक बजारमा पनि मूल्य घट्न थालेको व्यवसायी बताउँछन् ।
‘पहिला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य प्रतिटन ५ सय ६० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको थियो, अहिले घटेर ५ सय डलरमा झरेको छ,’ साखले भने, ‘कच्चा पदार्थको मूल्य घटेपछि डन्डीको भाउ स्वतः घटिहाल्छ ।’ नेपालमा डन्डी उत्पादन भए पनि कच्चा पदार्थ विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही कारण डन्डीको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको स्टिल तथा रोलिङ मिल एसोसिएसनका अर्का उपाध्यक्ष एवं अम्बे स्टिलका सञ्चालक हरि न्यौपानेले बताए ।
‘कच्चा पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य घटे पनि अझै नयाँ माल आइपुगेको छैन, तैपनि बजारमा डन्डीको मूल्य घटिसकेको अवस्था छ,’ न्यौपानेले भने, ‘डन्डीको भाउ घटबढमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको प्रभाव तत्कालै परिहाल्छ ।’ यसै पनि बजारको मागभन्दा उद्योगको उत्पादन क्षमता दोब्बर छ । त्यसमाथि अहिले कोभिड महामारीका कारण डन्डीको माग बढ्न सकेको छैन ।
विकास निर्माणका कामहरू सुस्त भएपछि निर्माण सामग्रीको मागमा शिथिलता आएको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि नेपाली उपभोक्ताहरू कहिले मूल्य घट्ला भनेर कुरेर बस्छन्,’ साखले भने, ‘हामीले घटेको मूल्यमा कच्चा पदार्थ आउन नपाउँदै डन्डीको मूल्य घटाएर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ, नत्र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा डन्डी बिक्री गर्न सकिँदैन ।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धिभन्दा निकै बढी डन्डीको मूल्य बढाएको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ । निर्माणको सिजन सुरु हुनेबित्तिकै उद्योगीहरूले कार्टेलिङ गरेर डन्डीको भाउ बढाउने निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ । तर, तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफूखुसी मूल्य बढाउन सम्भव नभएको भन्दै उद्योगीहरू कार्टेलिङ गरेको आरोप स्विकार्न तयार छैनन् ।
अहिले मुलुकभर ठूला–साना गरी २५ वटा डन्डी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो अढाई वर्षमा मात्र मुलुकमा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका ८ वटा ठूला डन्डी उद्योग थपिएका हुन् । यी उद्योगहरूको वार्षिक उत्पादन क्षमता ३० लाख मेट्रिकटन हाराहारी रहेको छ । तर, बजारमा डन्डीको माग वार्षिक १४ लाख टन मात्र रहेको बताइन्छ । अझ अहिले कोभिड महामारीका कारण डन्डीको माग ह्वात्तै घटेको व्यवसायीको गुनासो छ । बजारको डन्डीको मागभन्दा उत्पादन क्षमता बढी भएपछि उद्योगको जडित क्षमता औसतमा आधा मात्र उपयोग भइरहेको छ ।
साखका अनुसार कच्चा पदार्थको मूल्य प्रतिटन ५ सय ६० डलर पुग्दा नेपाली बजारमा डन्डीको फ्याक्ट्री मूल्य ८८–८९ रुपैयाँसम्म पुग्नुपथ्र्यो । तर, कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको तुलनामा डन्डीमा आधा मात्र मूल्य बढाएको उनको जिकिर छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको जति मूल्य बढ्छ, त्यसको आधा मात्र डन्डीको भाउ बढाउँदा पनि चर्को विरोध गरिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य घट्दा हामीले त्यति नै मूल्य घटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’
बजारमा डन्डीको आपूर्ति धेरै हुँदा उद्योगहरूबीच नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेको बताउँदै उनी थप्छन्, ‘ठूलो लगानी गरेका उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा डन्डीको भाउ आधा बढाउन पनि सकस हुन्छ, तर कच्चा पदार्थको मूल्य घट्दा डन्डीको पूरै भाउ घटाउनुपर्छ ।’